Ogaden News Agency (ONA) – Shir hawleed uu yeeshay Sabtidii ururka OYSU faraca Denmark.
Shir hawleed uu yeeshay Sabtidii ururka OYSU faraca Denmark.
Maalintii sabtida 3-12-2011 ayaa waxaa shir ku qabsaday Xarunta Jaaliyada Ogaadeeniya ee WadankaDenmarkmagaalada Copenhagen Ururka Midowga Dhalinta iyo Ardayda Ogaadeeniya eeDenmark.
Shirkaas oo Dhalinyaradu ay isaga kala yimaadeen gobolada wadankaasiDenmarkuu ka koobanyahay ayaa lagu qaadaadhigay wax qabadkii ururka ee wadankaniDenmark.
Waxaa shirka furay Xoghayaha Ururka Midowga dhalinta iyo ardayda Ogaadeeniya ee Denmark Marwo Nasra Sh. Waxaa ayaduna madasha ka hadlay Afhayeenka ururka Marwo Najma Abdi oo ayadu meesha kusoo bandhigtay wax qabadkii ururka ee sanadka. Hogaanka Dhaqaalaha Marwo Manna Maxamud iyo Xoghayaha Ururka Marwo Nasra oo iskaashanaya ayaa ayaguna soo bandhigay dhaqaalihii ururka ee sanadkan dhamaadka ah 2011 qaabkuu ku baxay iyo siduu kusoo galay– Isla mar ahaantaana xubhanii ururka Midowga Dhalinta iyo ardayda Ogaadeeniya ee madasha joogay ayaa aad oogu qancay Xog warankas sida wanaagsan loogasoo shaqeeyay iyo sida qiimaha iyo qadarinta leh ee Maamulka Ururku u qanciyay ee uu si tifa tiran wax qabadkii uruka iyo Dhaqaalihiiba uga haqab tireen xubnaha ururka Midowga dhalinta iyo Ardayda Ogaadeeniya ee Denmark.
Waxaa madasha ka halday Gudoomiyaha Jaaliyada oo goobjoog ka ahaa shirka Mudane Xasan Macalin. Marwo Istaahil Xirsi Mahad oo shirka kasoo qayb gashay goobjoogna ka ahayd ayaa waxa ay Gudoonsiisay Bilad sharaf ay jaaliyada Soomaalida Ogaadeeniya eeDenmarkoogu tala gashay ururka Midowga dhalinta iyo ardayda Ogaadeeniya eeDenmark.
Kadib waxaa lagalay oo laysla qaadaa dhigay fikrad iswaydaarsi ku wajahan Qorsha sanadeedka 2012 ee Ururka Midowga Dhalinta iyo Ardayda ogaadeeniya ee wadankaniDenmark.
Ururka Midowga Dhalinta iyo Ardayda Ogaadeeniya ee Denmark waxay isla meel dhigeen Qorshe sanadeedka Ururka Midowga dhalinta iyo ardayda Ogaadeeniya ee Denmark sanadka 2012 ayaga oo is waafajinaya Hadafka iyo ujeedada ururka loo yagleelay. Waxaa shirka kasoo qayb galay oo marti ku ahaa masuuliyiin kamida maamulka African pride ee wadankaDenmark.